1379 Sanadood Kadib Magaalada Xalab Ee Dalka Suuriya Oo Aan Maanta Lagu Tukan Salaadda Jimcaha. – Bogga Calamada.com
April 29, 2016 1:09 pm Views: 12
Guddiga sharciga Mujaahidiinta Suuriya ayaa iclaamiyay in aan Salaadda Jimcaha lagu tukan Karin masaajidda magaalada sababa laxariira duqeymo aan kala joogsi laheyn oo magaalada iyo dadkeeda kala kulmayaan diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo kuwa Nidaamka Nuseyriga Bishaar Asad.
Magaalada Xalab oo ah magaalo xadaaradeed ay muslimiintu leeyihiin waxaa ka jirta musiibo baniâ€™aadanimo,duqeymaha diyaaradaha Kufaarta Ruushka iyo kuwa Nuseyriga Asad ay ka geysteen magaalada sedaxdii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa lagu dilay 134 qof oo ubadan haween iyo carruur.
Â Muslimiinta ayaa furtay magaalada Xalab sanadkii 637 Miilaadiga waxaa xiligaasi ciidanka Muslimiinta hoggaaminayay saxaabiga Jaliilka ah Abuu Cubeyda Caamir Bin Jarraax oo ka mid ah tobanka saxaabi ee iyagoo nool janada loogu bishaareeyay wuxuuna ka furtay ciidamadii dowladdii Bizandiiniyiinta.
Tani waxay ka dhigantahay in markii ugu horraysay aan salaad Jimco lagu tukan Xalab muddo 1379 sanadood kadib.
Ragga Firfircoon ee soo tabiya kacdoonka Suuriya ayaa ugu baaqay dhammaan xoogaga jihaadiga ah in ay ka qeyb galaan dagaalka lagu difaacayo magaalada.